यी हुन् दुनियाकै सबैभन्दा अग्ली किशोरी – Saurahaonline.com
सौराहा अनलाइन | २०७३, १५ आश्विन शनिबार
उनको उमेर जम्मा १९ वर्ष छ । तर सामान्य मानिसले उनको अनुहारमा हेर्नका लागि टाउको पछाडि झुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
विश्वकै सबैभन्दा अग्ली किशोरीको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी टर्कीकी रुमिजा गेल्गी यति अग्ली छिन् की उनको अनुहारमा सिधा नजरले हेर्न असम्भव छ र अग्लो टावरको टुप्पोमा हेर्दा टाउको पछाडि लगेझैँ गर्नुपर्छ ।
यी किशोरी यति अग्ली हुनु एउटा वंशाणुजन्य रोगको कारणले हो । यसलाई वेभर सिन्ड्रोम भनिन्छ ।
सन् १९९७ मा गेल्गी जन्मिँदा विश्वमा यो रोग भएका मानिसको संख्या जम्मा २० थियो ।
यो दुर्लभ रोगका कारण गेल्गीका खुट्टाले उनको जिउको भार थाम्न हम्मेहम्मे पर्छ । हिँडडुल गर्न पनि वैशाखीको सहारा चाहिन्छ । तर यति हुँदापनि उनी खुसी नै छिन्, दुनियाको सबैभन्दा अग्ली किशोरी हुन पाएकोमा । सन् २०१४ मा विश्वकी सबैभन्दा अग्ली किशोरीको रुपमा उनको नाम गिनिज बुकमा दर्ता भएको थियो । उनको उचाई ७.०९ फिट रहेको छ ।
जीवन उपयोगी १० रोचक तथ्य २०७८, २० जेष्ठ बिहीबार
पाँच रोचक तथा ज्ञानवर्द्धक तथ्यहरु २०७८, १७ जेष्ठ सोमबार
के तपाइकाे दिउसै सपना देख्ने बानी छ ? यस्ता छन् फाइदा २०७८, ८ जेष्ठ शनिबार
गाईको गोबर र गहुँतले नुहाएर कोरोना भाइरस भाग्ने ! २०७८, ३० बैशाख बिहीबार
के मुख छाडेर अपशब्द बोल्दा मन हलुङ्गो हुन्छ? २०७८, २३ बैशाख बिहीबार
२५ वर्षीया महिलाले एकैपटकमा जन्माइन् ९ वटा बच्चा २०७८, २२ बैशाख बुधबार